Ukulandela umkhondo wentengiso ye-ROI yeeDummies | Martech Zone
Ukulandela umkhondo wentengiso ye-ROI yeeDummies
NgoLwesihlanu, Meyi 9, 2014 Douglas Karr
Abantu baseUberflip bathathe indlela ebanzi yokwenza kubalwa imbuyekezo yentengiso yomxholo kutyalomali, kwaye uyibeke kule uber epholileyo.
Ukuthandwa kokuthengisa umxholo akunakuphikwa. Ngokwe- Institute Marketing Marketing Institute, ngaphezulu kwe-90% yeempawu sele zityala imali kwi-eBooks, iividiyo, imidiya yoluntu, ukubhloga kunye nezinye iindlela. Nangona kunjalo, sisiqingatha esingaphantsi kwesiqingatha sabo kuphela abayaziyo ngqo indlela yokulandela umkhondo weenzame zabo.
Ingcebiso yam kuphela ekusebenziseni esi sicwangciso kukuyiqonda loo nto I-ROI kumxholo ayihlali, iyatshintsha ngokuhamba kwexesha. Rhoqo, ukubuya kutyalo-mali kwiphepha elimhlophe elinye okanye kwi-infographic okanye nakwiposti yebhlog kunokukhulisa igunya lakho kwaye kunyuse ingeniso kaninzi. Kwaye ukuthandwa komxholo wakho namhlanje kunokuba nefuthe ekusebenzeni komxholo wakho ngomso. Umxholo wentengiso ye-ROI ayisiyokubala okumileyo, yeyona ifuna kunye nokwakha umfutho ekuhambeni kwexesha.
tags: umxholo wentengisoindleko zokuthengisa umxholoumxholo wentengiso roiguqukaDummieskwi-infographicukubuya kutyalo maliROIisabelo selizwi
Piwik: Umthombo ovulekileyo woVavanyo lweWebhu
Impembelelo imalunga nokuGuqulwa, hayi ukuFikelela
Meyi 11, 2014 kwi-6: 48 AM
Iposi enkulu uDoug! Enkoso ngokwabelana…
Meyi 12, 2014 kwi-9: 17 AM
Ndivumelana ngokupheleleyo nawe, wabelane ngamanqaku amahle malunga nokulandela umkhondo wentengiso ye-ROI yeedummies ebekunzima ukuxoxa ngazo. Indincedile ukuba ndonyuse ulwazi malunga nokuthengisa umxholo. Yonke ingxoxo yakho imnandi kwaye iluncedo kubo bonke. Enkosi ngokwabelana nathi ngeposi eluncedo.